Bụrụ China Hot- ere kf94 mkpuchi ihu Ime igwe / f94 ihu / kf94 korea / kf94 igwe ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta |HRF
Na-ere ọkụ na-ere kf94 mkpuchi ihu Ime igwe / f94 ihu / kf94 korea / kf94 igwe
Igwe ahụ dum bụ akụkụ nke ihe nzacha ihe, akụkụ ahịrị imi nke elu, akụkụ ịgbado ọkụ, akụkụ mpịachi, akụkụ cutter, akụkụ ntụgharị, akụkụ nkesa ihe, akụkụ eriri ntị, na akụkụ mkpokọta.
1.Material frame part: ikuku mgbasawanye ogwe aka, magnetik powder breeki na njikwa iji hụ na ihe mgbagwoju anya na-adịghị wrinkle.
2.Upper imi akara akụkụ: cylinder na-welded na ultrasonic ife iji dozie imi akara na ogologo chọrọ ka ihe onwunwe.
3.Shape ịgbado ọkụ akụkụ: ebu na-dakọtara na ultrasonic ife, na mbụ texture ịgbado ọkụ.
4.Mpịakọta: akwa akwa
5.Shape cutter akụkụ: omenala mere cutter, mpịakọta ịkpụ akpụ, n'oge a ihe nkpuchi na-mmalite kpụrụ.
6.Flip akụkụ: tụgharịa ihe mkpuchi ahụ iji kwadebe maka eriri ntị 7.Partitioning: Nkesa ezi uche dị na ya, ụbara ikike mmepụta 8.Ear strap akụkụ: diski na-atụgharị pụrụ iche maka ụlọ ọrụ ihe nkpuchi, nke a na-eji hụ weld eriri eriri ntị. na ihe nkpuchi nke ọkara nke emechara na ultrasonic, a na-emepụta ihe mkpuchi ahụ n'oge a 9. Nchịkọta akụkụ: wepụ belt ahụ, nchịkọta ngwaahịa.
Nha ngwaahịa mpịachi ọdabara Ihe mkpuchi nwere ike mpịachi nwere nha ahịa
obosara ihe Dị ka nha ngwaahịa si dị
Ike mmepụta 45± 5pcs / nkeji
60Ikike dị mma 220V/380V,50HZ/60HZ
Ọdabara ikuku ọkọnọ 0.5∽0.7Mpa
gosiri ike 7,5kw
Nha igwe 5700mm x 4500mm x 1900mm
Ibu igwe A na-atụ ya na ngalaba, otu ngalaba erughị 200KG
Nke gara aga: Igwe nkpuchi ihu kf94 zuru oke / f94 ihu / kf94 korea / kf94 igwe
Osote: N95 zuru oke akpaka ihu mkpuchi na-eme igwe mmepụta ahịrị
Igwe eji ebu ihe mkpuchi Kf94 akpaaka
Igwe nkpuchi ihu Kf94
Igwe nkpuchi akpaaka Kf94
Igwe ihe mkpuchi Kf94
Igwe nkpuchi Kf94 Ime
Igwe na-eme ihe mkpuchi Kf94
Igwe eji ebu ihe mkpuchi Kf94
Igwe na-emepụta ihe mkpuchi Kf94
Igwe nkpuchi eze Kf94
Igwe na-emepụta ihe mkpuchi maka Kf94
Full akpaaka kf94 ihu mkpuchi Ime igwe/f9...